အဖျော်ယမကာများ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်း>စားသောက်ကုန်>အဖျော်ယမကာများ
ကုန်ပစ္စည်း 16 ခု ရှိပါသည်
Hi Top အမှတ်တံဆိပ် Deep Ocean Water 1. ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်စေပြီး ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ 2. ခန္တာကိုယ်အတွင်း အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သွေးတိုး၊ သွေချို နှင့် သွေးတွင်းအဆီများကို ထိန်းညှိပေးခြင်း။ 3. ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြေလျော့ပေးပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ။
အာဟာရဓါတ်ကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးသည့် Hi Top Energy Plus+ Drinking Water 1. ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်စေပြီး ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ 2. ခန္တာကိုယ်အတွင်း အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သွေးတိုး၊ သွေချို နှင့် သွေးတွင်းအဆီများကို ထိန်းညှိပေးခြင်း။ 3. ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြေလျော့ပေးပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ။